Wing mirror blind spot မဖြစ်အောင်ဘယ်လိုချိန်မလဲ?
ဒီဘက်ခေတ်ကားတော်တော်များမှာတော့ Blind Spot Detection စနစ်တွေ၊ Blind spot monitor စနစ်တွေပါဝင်လာကြပါပြီ။ ကားတစီးကို မောင်းနှင်ရာမှာ blind spot ဖြစ်တဲ့နေရာ အနည်းနဲ့အများရှိကြပေမဲ့ အများဆုံး ဖြစ်တတ်ကြတာကတော့ နံဘေးနောက်ကြည့်မှန် (wing mirror) မှာပါဲဖြစ်ပါတယ်။
Wing mirror blind spot ဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုရင်တော့ ကိုယ့်ကားရဲ့နောက်ဘီးနဲ့ အပြိုင်ယာဉ်ကြောက နောက်ကကားရဲ့ရှေ့ဘီး တတန်းထဲဖြစ်နေချိန်မှာဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ကိုယ့်ကားနောက်က လာနေတဲ့ကားဖြစ်ပေမဲ့ ကိုယ့်ရဲ့ နောက်ကြည့်ဘေးမှန်ထဲမှာ အဲဒီကားကို လုံးဝမမြင်ရသလို ၊ အလယ်က နောက်ကြည့်မှန်ထဲမှာလည်း အဲဒီကားကို လုံးဝမမြင်ရတာမျိုးကို ဆိုလိုတာပါ။
အဓိကကတော့ နောက်ကြည့်ဘေးမှန်ကို ချိန်တဲ့ပုံစံပါပဲ။ အများစုက ကားကိုယ်ထည်နည်းနည်းပါအောင် ထည့်ချိန်ကြပါတယ်။ အဲဒါမှားယွင်းမှုပါပဲ။ fig.2 နဲ့ fig5ကိုကြည့်ပါ။
အကောင်းဆုံးက ကိုယ်ရဲ့ မောင်းနှင်မှုအနေအထားအတိုင်း ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင် ကားကိုယ်ထည် ပျောက်သွားတဲ့အထိ ချိန်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ပိုပြီးတိတိကျကျပြောရမယ်ဆိုရင် ကိုယ့်ကားကိုယ်ထည် ပျောက်သွားတဲ့အထိ နောက်ကြည့်မှန်တွေကို အပြင်ကိုကားထုတ်ပြီး ပျောက်သွားသွားခြင်းမှာပဲ ရပ်လိုက်ပါ။ ဒါဆိုရင် ပုံမှန်ကားမောင်းနေတုန်း ပျောက်ပျောက်နေတတ်တဲ့ အပြိုင်ယာဉ်ကြောမှာရှိတဲ့ နောက်ကကားကို မြင်နိုင်ပါပြီ။ fig. 1 နဲ့ fig.4ကိုကြည့်ပါ။
ကားကိုယ်ထည်ပျောက်သွားသွားခြင်းမှာရပ်ထားတဲ့အတွက် ကိုယ့်ကားကိုယ်ထည်ကိုမြင်ချင်တဲ့စိတ်မျိုး (အရင်လုပ်နေကျအစွဲအလမ်း) ဖြစ်လာရင်လည်း ခေါင်းကိုနည်းနည်းစောင်းပြီး ကြည့်လို့ရနိုင်ပါဦးမယ်။
တချို့ကလည်း Blind Spot Mirror ဆိုပြီး မှန်အခုံးလေးတွေဝယ်တပ်ကာဖြေရှင်းကြတာမျိုးလည်း ရှိနေပါတယ်။
Covid 19 ကာလအတွင်း ကားမောင်းနေစဉ် Mask တပ်ထားဖို့လိုအပ်သလား?
အခုလိုအချိန် ကားမောင်းစဉ်မှာ Mask ကိုဖြုတ်ထားဖို့အတွက် အောက်ပါအချက်တွေ ပြည့်စုံဖို့လိုပါလိမ့်မယ်။
Air con ဖွင့်ထားရပါမယ်။
Air recirculation button (အပြင်ကလေကို မယူဘဲ အတွင်းလေပဲလှည့်လယ်စေတဲ့ ခလုတ်) ကိုနှိပ်ထားရပါမယ်။
ကားထဲမှာ ကိုယ်တယောက်တည်း ဒါမှမဟုတ် ကိုယ့်အိမ်သား (ကိုယ်နဲ့အနီးကပ် mask မတပ်ဘဲ ဆက်ဆံနေထိုင်သူများ၊ တနည်းပြောရရင် ကိုယ့်မှာဖြစ်ဖြစ် သူ့မှာဖြစ်ဖြစ် positive ထွက်ရင် Q လိုက်ဝင်ရမည့်သူများ) တွေသာရှိရပါမယ်။
သတိပြုစရာတခုက အပြင်မှာ တပ်ဆင်ထားပြီးတဲ့ mask ကို ကားထဲမဝင်မီချွတ်တာမျိုး လုပ်သင့်ပါတယ်။ အဓိကက mask မှာကပ်ညိနေနိုင်မယ့် virus တွေ ကိုယ့်ကားအတွင်းခန်းရဲ့ လေအေးပေးစနစ်ထဲ ရောက်မသွားဖို့ပါ။ ဒီလိုမှမဟုတ်လည်း အပြင်တပ်လာတဲ့ mask ကို မချွတ်ပဲ မောင်းနှင်ရာမှာလည်း တောက်လျောက်တပ်ဆင်ထားသင့်ပါတယ်။
ဒီအချက်တွေနဲ့ ပြည့်စုံတယ်ဆိုရင်တော့ ကားမောင်းနေစဉ်အတွင်း mask ကိုချွတ်ထားနိုင်ပါတယ်။ ဒီလိုမှမဟုတ်ရင်တော့ ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ရော၊ ကိုယ့်ကားမှာပါတဲ့သူတွေအားလုံးပါ mask တပ်ထားဖို့ အထူးလိုပါလိမ့်မယ်။ ကိုယ်ကိုယ်တိုင်နဲ့ လိုက်ပါလာတဲ့လူတွေ တစ်ယောက်ယောက်စီမှာများ ရောဂါပိုးပါလာခဲ့မယ်ဆိုရင် မိမိတို့ဟာ ကျယ်းမြောင်းတဲ့ air-con အခန်းငယ်တစ်ခုတည်းရောက်ရှိနေတာကို မမေ့ပါနှင့်။ သတိကြီးကြီးထားကြပါ။ ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်တွေကို အသေအချာလိုက်နာကြပါလို့ ဆန္ဒပြုလိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျာ။